HawkPE-39 The Windows (BartPE) + Linux Live CD Packed - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Applications, Operating Systems & E-books » Operating Systems » Linux OS
HawkPE-39 The Windows (BartPE) + Linux Live CD Packed
Linux OS Linux OS များ ထားရှိသည့် နေရာဖြစ်ပါသည်
HawkPE-39 The Windows (BartPE) + Linux Live CD Packed | 426 MB
HawkPE-39 The Windows (BartPE) + Linux Live CD !, The PC Tech Siwss Army Knife. A fully-functional BartPE/WinPE (Windows XP SP2) + Linux (Slax-6-RC6) live CD ISO. Comes w/ AdAware SE + McAfee AV + ClamAV + SpywareDoctor updated as of 20-Aug, Windows Explorer, SmartDriverBackup, PCITREE, FoxIt PDF Reader, FileZilla FTP Client, Ghost 8, UltraVNC, Partition Magic 8, CHNTPW (now Vista-compatible), WIPECMOS, MEMTEST, the IBM/Seagate/WD hdrive diagnostics, etc. Boots to BartPE by default.
Slax is an excellent example ofaportable Linux, which comes w/Firefox-2+Flash-9, KDE's KOffice suite, multimedia goodies, and the latest K3B CD/DVD burning application. So withaUSB thumb drive and your HAWKPE CD/DVD, you can carryamultimedia-enabled computer system, with you at all times.
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ ဘိုးတော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နိုင်လင်းစိုး, အမြင့်ပျံလင်းယုန်, kotharaye, maJunior, minthike, thureinsoe, zo
ပြန်စာ - HawkPE-39 The Windows (BartPE) + Linux Live CD Packed
window live cd လေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်ချင်တာနဲ့ BartPE ဆိုတာကို ရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်..
ကိုဘိုးတော်ပေးထားတဲ့ cd က window အတွက်လား..ဒါမှမဟုတ် linux အတွက်လားဆိုတာ
bartpe နဲ့ boot cd လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးလည်း..ပြောပြစေချင်ပါတယ်.
Last edited by maJunior; 06-05-2009 at 10:17 AM..
ကျွန်တော်အင်တာနက်က နေပြန်ရှာပေးထားပါတယ်အဆင်ပြေပါစေ အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းတော့ အပိုင်းမခွဲပေးနိုင်တာကိုခွင့်လွတ်ပါနော် အဆင်ပြေပါစေ။ အဆင်မပြေရင်ပြန်ပြောပါ။
hawkpe-39 the windows (bartpe) linux live cd packed.zip
Last edited by မောင်ပေါ်ဦး; 14-12-2011 at 06:42 PM..
မျိုးဟန်ထက်, minthike, zo
Portable Windows XP Live USB Edition 2007_usbtools Aung Aung Windows XP728-05-2008 05:13 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 08:34 AM